प्रधानमन्त्रीलाई पत्र………….. – Gulmiews
२१ आश्विन २०७२, बिहीबार २३:५८ Sanju Kauchha
No comments	सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
हुन त मैले लेखिरहेका हरफहरु जस्ता त हजारौँ हरफ आएकै होलान् । कतिपयमा तपाईको आँखा पनि गएकै होला कतिपयलाई तपाईसमक्ष पुर्याउन ठेक्का लिएर वसेकाहरुले देखेको नदेखी सुनेको नसुनी पढेको नपढी गरी बेवास्ता गरे होलान् । तर जे गरुन् तपाई जे गर्नोस् यो मेरो मनले मान्दै मानेन लेखेरै छोँडे । यसमा तपाईका आँखा जालान अनि वीसको उन्नाईस होला भन्ने त आशा छैन । तै पनि मन थामिएन नलेखी बस्नै सकिन । हुन त लेखेरै हुने भए म भन्दा जान्ने सयौँ विद्धानले हजारौँ विवेकशील लेख लेखेकै होलान । अनि वेलावेलामा घचघचाई रहेका होलान् ।
अरुको उपचार गराउन गए पनि कानको उपचार गराउन त गएको मैले सुनेको छैन । त्यही भएर मेरो विश्वास छ तपाईले सुन्नु नै भएको होला देशको सुरक्षारार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई भालाले रोपेर मारेको । ज्यूँदै जलाएको । दुधे वालकलाई कुटीकुटी मारेको । त्यति मात्रै होईन समान किन्न सुनौली गएका पहाडी मूलका भनिएका एक जनालाई चिराचिरा पारेर काटेको ।
सवैभन्दा कडा मानिने फलाम त भट्टीमा हालेपछि पग्लेर झोल वन्छ । तर प्रधानमन्त्री ज्यू तपाईको मन त त्यो भन्दा पनि कडा र कठोर रैछ । तपाईको मन पगाल्ने भट्टी यहाँभन्दा के हुन्छ अरु ? पहाडे मुलको भनेर एकजना नेपालीलाई चिराचिरा पारेर काटेको, अनि पुसिलको सन्तान भनेर दुधे वालकलाई कुटी कुटी मारेको । कि तपाईको मन पगाल्न यो भन्दा अझै वढि तापक्रमको भट्टी चाहिने हो ?
नेपाल जलेको दुई महिनाभन्दा वढि भैसक्यो । समस्या वीसको उन्नाईस होला भन्दा वीसको चालीस भैसक्यो ।
नेपाल त जलेकै थियो । त्यसमा भारतले पनि घिउ थप्यो । विचरो तेल थपोस् भने पानीले आगो निभाएर त्यही तेलले गाडी चलाउँछन भन्ने वुझेछ क्यारे ।
चुलोमा आगो वल्न छोडेको हप्तौँ भैसक्यो । तर अरुको चुलोमा आगो नवले पनि आफ्नो चुलोमा वल्न नछोड्दासम्म अरुको पीडा थाहा नहुँदो रैछ सायद । चुलो नवोलेर खान नपाई भोकै सुतेको दुधे वालकको सराप तपाईलाई लाग्ने छ । किनकि समस्याको समाधान गर्ने सर्वोत्तम निकायमा तपाई हुनुहुन्छ ।
हुन त तपाईकै संचारमन्त्रीले भारतले हाम्लाई नाकावन्दी गरेको छैन भन्छन रे अनि अर्थमन्त्रीपनि त्यही लाईनमा । अरुको चुले नवलेपनि तपाईहरुको पुस्तौँपुस्तासम्मको चुलो फास्ट ट्याकले वाल्छ होला । के भयो र ?
छिमेकीले मेरो बाटो नहिड भन्दा निकास नभएको मेरो अधिकार खोसियो भन्दै न्याय मागेको खोई ? हुन त अहिले न्याय मागेर ठूल्याईँ देखाएर के गर्नु आखिर त्यसैको हात सिरमा नपरी प्रधानमन्त्री भईन्न भन्ने कति डर होला ।
अनि दिनभर गिट्टी कुटेर छोराछोरी पाल्ने आमाले त भोली गिटी कुट्न नपाए । वालुवा वोक्ने विकल्प राखेकी हुन्छिन । देश हाँक्छु भन्नेको विकल्प खोई ? धिक्कार छ देश हाँक्छु भन्नुको ।
हुन त प्रधानमन्त्री मन्त्री बनेपछि सम्पत्ति कुम्ल्याउने र सके विश्वकै नसके नेपालकै त्यति पनि नभए पार्टीकै सबैभन्दा धनी ब्यक्ति बन्ने प्रतिपर्धा त नेपाली राजनीतिको संस्कार भनेर बुझ्न नसक्ने पनि म उस्तै ।
अहिलेको यो समस्याको समाधानभन्दा पनि तपाईहरुलाई सत्ताको चिन्ता होला । त्यही भएर त देशको यो समस्या तपाईको प्राथमिकतामा नपरेको होला ।
फेरी पनि भोट माग्न आउन पर्छ भन्ने सौच्यो, जनता सर्वोपरी भन्ने ठान्योे अनि जनताको फाटेको मन टाल्यो र टाढिएको सम्बन्ध जोड्यो भने यसैमा होला तपाईको भविष्य ।